Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguBachcare
Ukubaleka ngendlela engafaniyo nenye, ibekwe ngokugqibeleleyo kwintlambo enendawo engasemva yeenduli ezimangalisayo ze-Akaroa-awunakujonga ngaphaya kweBellbird Bach!
Uyilo olutsha nolwenziwayo, oluyilelwe ukubhiyozela indawo ekuyo kwaye luncome imbonakalo entle yeAkaroa. Amatyholo omthonyama kunye neentaka zijikeleze ikhaya ukukunceda ukuba uphile kwaye unikeze indawo yokuphumla ukuba ubize ikhaya. Nokuba yinto yokuqala ekuseni ngekomityi yekofu kwi-sundeck, ithatha umoya omtsha wasemazantsi okanye ekupheleni kobusuku ugqunywe ngumlilo ngefilimu - uBellbird Bach uye wagquma.
Kwihlobo lihlala livutha i-BBQ, vula inkqubo yesandi seBluetooth kwaye ujabulele ezo ntsuku elangeni. Kwaye eBusika, xa ungekho kuhambo olukufutshane lwaseMazantsi, yonwabele iWiFi kunye neNetflix. Thatha ixesha lakho kwaye wonwabele ukuthotywa okutofotofo kwitubhu eshushu engaphandle ngamaplanga!
Xa uziva ngathi uphuma, yimizuzu nje ukusuka edolophini kunye nokhetho lweevenkile, iicafe, kunye neegalari onokuzonwabela. Ukuba uziva ngathi uphonononga okanye ukuba emva kwakho kokungaphezulu kweSiqithi saseMzantsi, tsiba kwinqwelo-mafutha kwaye undwendwele enye yeebheyi ezininzi ezingqongileyo (iPigeon kunye neHickory Bay ziimizuzu engama-30 yokuqhuba), okanye iChristchurch phantsi kweeyure ezi-2 uqhuba.
Yiya kwintlambo kwaye ufumane le ndawo yokubuyela umva-iBellbird Bach ilindile!
Le yipropathi ebanzi yokulala eyi-2. Nceda uqaphele, ubume bebhedi kule propathi bubandakanya iBhedi kaKumkanikazi kwigumbi lokulala loku-1, iBhedi kaKumkanikazi kwigumbi lokulala eli-2 kunye neBhedi enye ekwigumbi eliphezulu lokuhlala eli-1.
4.83 ·Izimvo eziyi-23
Umbuki zindwendwe ngu- Bachcare
Izimvo eziyi-4 814
Ukukunceda ukuba ufumane indawo yakho eyonwabileyo yeyona nto iphambili kuthi, kwaye ngenxa yoko sinamaqela akhoyo okukunceda kulo lonke ixesha lokuhlala kwakho.Ukusuka kwinkxaso yethu ephakathi kumnxeba nje, ukuya kumaqela ethu asekuhlaleni asezantsi, siyaqinisekisa ukuba sikuhlawulele ngayo nantoni na enokuthi ivele.
Ukukunceda ukuba ufumane indawo yakho eyonwabileyo yeyona nto iphambili kuthi, kwaye ngenxa yoko sinamaqela akhoyo okukunceda kulo lonke ixesha lokuhlala kwakho.Ukusuka kwinkxaso y…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Akaroa